Ukuphathwa nge Izinhloso kungenziwa wayebiza ifilosofi ngokuthi. Ngaleli thuluzi kungenzeka ngempumelelo lelisu amasu ngokusebenzisa abasebenzi orientation ukufeza imiphumela eziphathekako ezingalinganiseka. Ukuphathwa nge Izinjongo kusivumela ukuthuthukisa ikhono yenkampani ukuze anqume kusengaphambili ikusasa, kunokuba bathathe isinyathelo, kuye ngokuthi kwenzekani ngesikhathi samanje. Liyanezela ukuhlela yendabuko ngabanye umthwalo futhi ugqozi izikimu. Le filosofi luhlanganisa eziningana eziyinkimbinkimbi ukulawula imisebenzi. Phakathi kwabo: ukuhlela, ukuhlola kanye abasebenzi ugqozi, nokulawula.
Ukuphathwa nge Izinjongo kusho ukuxhumana phakathi Imiphumela ekufezeni endaweni yayo umthwalo lomholo. Le ndlela ivumela abasebenzi ukuze aqonde ukuthi yini edingekayo ukuze afeze inkampani, ngaleyo ndlela sisenze ukuba kahle kakhulu ukufeza imisebenzi yabo. Ukuphathwa nge Izinjongo inikeza impendulo kangcono ukuphathwa uhlelo kwenhlangano, sihlinzeka ngohlaka umgomo ukulawulwa impahla okukhuthaza abahlanganyela kuso. Ngaleli thuluzi, ungakwazi ngokunembile ukuhlela izidingo kwabasebenzi. Control Indlela yemigomo kusiza ukuthuthukisa ukuqonda mutual phakathi kwabaphathi abangaphansi. Okwesibili, futhi kukunika ithuba uthole amandla ngaphezulu, ukuba athathe isinyathelo kaningi.
Leli thuluzi likuvumela ukuba icubungulisise ukufeza izinhloso nokuxazulula izinkinga kwabasebenzi nokuphathwa enhlanganweni. essence yayo itholakala ekuthuthukisweni kanye nasekuqalisweni kokusebenza kohlelo ukuthi kubantu bawo wonke amazinga inkampani. izakhi aso angamazinyo emigomweni (njengoba inhlangano iyonke kanye nabasebenzi bayo ngabanye). Ukuze wenze lokhu, izimiso yokubola futhi Cascading isicelo. Izinjongo abokuqala kunqunywa ezingeni eliphezulu kakhulu, bese uwa phansi ngesimo iziyalezo eziqondile ngezansi (amayunithi ethize nabasebenzi). Ngaphezu kwalokho, ngamunye isisebenzi kule nqubo ye inkhulumomphendvulwano ukuqonda ukuthi yini edingekayo ukuze afeze le nhlangano (futhi yini inkinga yakhe). Izinjongo othuthukayo kakade isibe isimiso owaziwa SMART.
Izakhi eziyinhloko zalesi simiso ukhiye izinkomba. inhloso yabo - ukulinganisa umsebenzi owenziwe (kusebenta) abasebenzi, imisebenzi noma izinqubo zokuhlola ekhethiwe. Inani kahle KPI ngokuba isisebenzi ubhekwa 3-7 izibalo. Priority ukunquma isisindo sabo. Basuke ibukeke ngendlela SMART-amakhadi. elinye igama layo - KPI uhlu.
imisebenzi adingekayo kusukela umsebenzi yalokho, ngokuvamile, kulindeleke emazingeni amathathu (target, ephansi kanye engenhla). Kuleli kuncike amaholo ethile umsebenzi. Map noma ingxenye umholi ukusebenza zokuthuthukisa abasebenzi babo (ngqo futhi zisebenza kahle). amasevisi Yezisebenzi ukuphathwa ukunikeza ukuphathwa kwalo inqubo, umphumela okuyinto ibhonasi ukuze kufezwe ezinhle KPI sika. Amamephu ithuthukiswe amakhophi amabili (elilodwa ikhishelwe umsebenzi, wesibili igcinwe ngumphathi ukuba mzuzu efingqa). Kuyaphawuleka ukuthi isimiso esinjalo ukufeza ngempumelelo yezinhloso nezinjongo kwabasebenzi nokuphathwa, okuyizinto znachimymmi kakhulu.
Vaz-2114, i-probe lambda: izimpawu inzwa ukwehluleka futhi esikhundleni
Indlela ukugqoka tights mbumbulu enyathela?